ခင်လေးငယ် : 2013
ခင်လေးငယ် ::: 2013/ 09/ 14
Posted by Khin Lay Ngel at 11/19/2013 11:26:00 AM 1 comment:
နှင်းဆီငယ် (သို့မဟုတ်) “လရိပ်” ဖတ်ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာ ~
ဝေချင်လည်းဝေ- ကြွေချင်လည်း ကြွေနေကောပေါ့..။
အလှကြည့်သူ သက်သက်ဆိုလည်း “မှားတယ်..” ။
အရာရာကို သိ- နေပေးယုံနဲ့
ဆူးလည်း သူ့ အတိုင်း-
နူးညံ့မှုလည်း သူ့ အတိုင်း-
လန်းဖြာလည်း သူ့ အတိုင်း-
ညှိုးငယ်လည်း သူ့ အတိုင်း-
ကြွေသက်ချိန်ထိ အစွမ်းကုန် “သိပ်လှတယ်”..။
ရင်ခွင်လွှာ တစ်ကြော တစ်တောလုံး ဖြစ်တည်
ကိုယ့်အသိမှာတင် အရသာ ရှိခဲ့ပေါ့..။
2013/ 03/ 13 @10: 00 AM
Posted by Khin Lay Ngel at 11/18/2013 07:46:00 AM No comments:
ငှက်ဟာ ငှက်ရဲ့ ဉာဉ်အတိုင်း အရှိန်ယူတုန်း
ကောင်းကင်ဟာ (ရုတ်တရက်) သူ့ဆီပျံလာတယ်..။
ကောင်းကင်ဘုံဆီ (အတူတကွ) ထိုးတက်သွားလိုက်တာ ~~~
မျှော်သူတွေ လည်ဆန့်နေဆဲ-- မင်းတွေ့လား “ငှက်”..။
ခင်လေးငယ် ~ 2013/ 08/ 14
ထူးအိမ်သင် နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ကိုငှက်အား လွမ်းဆွတ်ခြင်းအားဖြင့် ရေးခဲ့သည်..။
Posted by Khin Lay Ngel at 11/18/2013 07:37:00 AM No comments:
တီးတိုးသဲ့သဲ့ ညည်းတွားမိသည်..။ ထို့နောက် နှုတ်မှဖွဖွ ရွတ်ဆိုမိပြန်၏..။
ကျွန်မ စိတ်နှလုံးအသိ၏ အဝန်းဝိုင်းထဲ၌ ထိုစကားလုံး မရှိ..။ ထိုနှင့်ခပ်ဆင်ဆင် တူနိုင်ပါသော အကြောင်းအားလည်း ကျွန်မ မပြု..။
ကောင်းကင်ယံ၌ ညိုမှိုင်းမှိုင်းတိမ်တိုက် အချို့ ဥဒဟို မျောလွင့်လျက် ရှိသည်..။ ကျွန်မ၏ နာရီအချို့ နှစ်ချီ၍ တိတ်တဆိတ် ငြိမ်ဝပ်နေသည်မှာ ရှည်ကြာခဲ့ပြီ..။
ကျွန်မသည် ကျွန်မသာဖြစ်ခြင်းကြောင့်~~ ကျွန်မသည် ကျွန်မကိုသာ မြင်အောင်ကြည့်ပါသည်..။
ကျွန်မ မဟုတ်သော အသင်သူသည် ကျွန်မအား နားလည်ရန် ကြည့်မြင်ခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင် သကဲ့သို့.. ကျွန်မသည် အသင့်အတွက် မှား/မှန် သုံးသပ်ရန် ပုစ္စာတစ်ပုဒ်လည်း ဟုတ်မနေပါ..။
“. . . . အိုဘယ့် အသင် . . . . ”
ရင်၌တည်သော အရာကိုသာ လည်ချောင်းတွင် အသံအဖြစ်ပြုပါလော့..!!
ထို့နောက် ရင်နှလုံးအိမ်မှ လာသော စကားများကိုသာ အသင့်ဝန်းကျင်၌ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဖူးပွင့်စေပါလော့..!!
အသင်သည် “အပေါ်ယံ..” များကို ဖယ်ကာ- အသင့်ကိုယ်အသင် မြင်အောင်ကြည့်ပါလော့..!!
(ခင်လေးငယ်) 2013/ 06/ 20
Posted by Khin Lay Ngel at 11/18/2013 07:32:00 AM No comments:
မိုးသည် ဝုန်းကနဲ သည်းသည်းမည်းမည်းရွာ၍ တိ- ကနဲ ရပ်သည်..။ အိပ်ခန်းမှ မှန်တံခါးများကို တွန်းဖွင့်ထွက်ပါလျင် ဝရံတာသို့ ရောက်၏..။ ဝရံတာ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ထင်ကျန်နေသော မိုးရေကွက်များပေါ်၌ ခြေဗလာကျင်းကာ ရပ်မိ၏..။ စိမ့်အေးသော လေသည် လတ်ဆတ်သယောင်ပြုကာ သွဲ့သွဲ့တိုက်ခတ်နေသည်..။
ခပ်လှမ်းလှမ်းသို့ ကြည့်ငေးမိသည်..။ ပိန်းပိတ်မှောင် ကင်းဘာ့စ်အမည်းခံတွင် ရောင်စုံနီယွန်မီးများ ထွန်းညှိထားသော အထပ်ခြောက်ဆယ်ကျော် အဆောက်ဦးတစ်ခုပုံ မှုံဝါးဝါးးပေါ်နေသည့် ပန်းချီကားတစ်ချပ် ရုပ်လုံးကြွကြွ ရှိနေ၏..။
စိုထိုင်းထိုင်းရှိသော ဝရံတာ လက်ရမ်းကို ကိုင်ဆုပ်၍ အောက်တည့်တည့်ကို ကြည့်ပါလျှင်- သေးသွယ်သွယ် ဈေးလမ်းကလေးကို မြင်ရသည်..။ နေ့ခင်းအချိန်များတွင် ကျွတ်ကျွတ်ညံ ရောင်းသူ ဝယ်သူများနှင့် ပြည့်နှက်နေလေ့ရှိသော သစ်သီးဆိုင်ငယ် လေးများမှာ ဆန့်ကျင်ဘက် အသွင်တစ်မျိုးနှင့် တိတ်တဆိတ် ရှိနှေ၏..။
ယနေ့သည် လပြည့်ည ဖြစ်သည်..။ တိမ်မည်းထု နောက်တွင် ပုန်းကွယ်ဝှက်နေသော ပြည့်လသည် ရှိမြဲရှိငြား.. မမြင်ရ..။ ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ငေးပြန်သည်..။ အလင်းနှင့် အမှောင်မှာ အတူတူသာလျှင် ဖြစ်သည်ဟု မဆီမဆိုင်တွေး၏..။ ညာလက်ထဲတွင် ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားသော အရာတစ်ခု ရှိနေနိုင်သည်..။
မြင်ကွင်းအားလုံးကို ခဏတာ နှုတ်ဆက်ကာ မတ်တပ်ရပ်လျက်ပင် မျက်လွှာများကို ပိတ်လိုက်သည်..။ မိမိ နှလုံးခုန်သံကို ကျယ်လောင်စွာ ကြားရသည်..။ အတက်အကျ- စီးချက်ညီညီနှင့် ဟန်ချက်တကျ ရှိ မနေကြောင်း ဆင်ခြင်မိ၏..။ စိတ်အာရုံသည် သတိကပ်နေရင်း၌ပင် တလှုပ်လှုပ် လူးလွန့်ထ၏..။
ဥတုရာသီနှင့် အသွင်တူလာသော စိတ်အစဉ်သည် မိနစ်ပိုင်းအချို့၌ လေးပင်ပင် ရှိလာပြန်သည်..။ ထို လေးပင်မှုကို အသာတကြည် ရှိခွင့် ပေးမိသောအခါ ကြောက်စိတ် ဝင်လာ၏..။ ကြောက်လန့်စိတ်သည် ဒေါသ တစ်မျိုးပင် ဖြစ်သည်..။ မရေတွက်နိုင်သော ဆံခြည်မျှင်များကဲ့သို့ ပြောင်းလဲနေသော စိတ်စက္ကန့်ပိုင်းလေး များသည် လေးလံထိုင်းမှိုင်းလွန်း နှေသည်..။
ကြည်လင်သန့်စင်နေခြင်း မရှိ- ပေါ့ပါး ရွှင်မြူးမှု မဲ့နေသည်..။ အတိတ်ကို တမ်းတစိတ်ဖြစ်သည်..။ အနာဂါတ်ကို မျှော်လင့်တကြီး ကူးပြောင်းပြန်သည်..။ ဆန္ဒပေါင်း ရာထောင်ချီသည် ထိုခဏလေး အတွင်းမှာပင် မောပမ်းစွာ ဖြစ်တည်နေ၏..။ စိတ်အလူးအတိုင်း လိုက်ပါကူးမိသော် ယခုသည် အကျည်းတန်စွာ ကွယ်ပျောက်တော့သည်..။
ထိုအရာများကို လွှတ်ချ လိုသည်..။ ထိုအရာများထံမှ ထွက်ပြေးလိုသည်..။ တဖျတ်ဖျတ် ပြောင်းလဲနေစဉ် အတွင်းမှာပင် ဖတ်ဖူးသော ရူမီ၏ ကဗျာတိုလေး တစ်ပုဒ်အား သတိရလာ၏..။ ညာလက်တွင် ဆုပ်ကိုင်ထားသော တစ်စုံတရာကို လွှတ်ချရင်း နှုတ်မှ ထိုကဗျာလေးကို ဖွဖွ ရွတ်ဆိုမိသည်..။
~ ရူမီ ~
အရာအားလုံးကို လွှတ်ချလိုက်ချိန် ထို ခဏတွင်.. မိုးရွာပြီးစ တိုကျိုည စစ်စစ်သည် ယခုမှ သူမထံ ရောက်လာတော့သည်..။ နှလုံးခုန်သံ၏ ကာရံညီမှု၌ စိတ်နှလုံးသည် ရုတ်ကနဲ ဖြူလွှပေါ့ပါး ငြိမ်သက်သွားတော့၏..။
မှတ်ချက်..။။ ရူမီ၏ ကဗျာလေးကို စကားလုံးအားဖြင့် တိုက်ရိုက် ပြန်ဆိုခြင်း မဟုတ်ပါ.. “အသိ” အားဖြင့် ပြန်ဆိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်..။
(ခင်လေးငယ်) 2013/ 06/ 24
Posted by Khin Lay Ngel at 11/18/2013 07:25:00 AM No comments:
ဝေးက မေ့သမီး ကြားနိုင်စေ..။.
ခင်လေးငယ် ~ 2013/ 08/ 21
မေမေ့မေတ္တာ မေမေ့စကားများအား လွမ်းဆွတ်သတိရရင်း ~ အားငယ်မိသော နေ့ရက်များထဲမှ မိမိကိုယ်တိုင်သို့ ခွန်အားပေး ရေးဖွဲ့ပါသည်..။
Posted by Khin Lay Ngel at 11/18/2013 07:11:00 AM No comments:
Posted by Khin Lay Ngel at 11/17/2013 12:30:00 PM No comments:
ခင့်အလွမ်းကို၊ ပုန်းသည့်လမင်း သိခဲ့သည်..။
ပြုံးဖြာပါက ကျေနပ်ပီတိ မောင်ရှိလေမည်..။
ခင်လေးငယ် ::: 2013/ 08/ 18 :::
Posted by Khin Lay Ngel at 11/17/2013 12:20:00 PM No comments:
ပြန်ဖြိုခံရတဲ့ စစ်တွင်းသုံး တံတားတွေလို
ဘုရားသခင် လက်ဖဝါးထဲက တိမ်တိုက်ညိုတွေ
ကိုယ့်အပေါ် သည်းကြီးမည်းကြီး တစ်ဝုန်းဝုန်း ရွာချ-
အတိတ်ဘဝကံရဲ့ သက္ကရာဇ်အိုတွေ ပြိုကျစေချင်ခဲ့တာ
စွန့်စွန့်စားစား ဒီစိတ်ဇော အကပ် (မာတိကာလှန်. နိဒါန်းပျိုးတုန်း)
အိပ်မက်တွေသာ ပျိုမျစ်စွာနဲ့ ညတိုင်းညတိုင်း ရပ်ရပ်သွား သတဲ့..။
ခင်လေးငယ် ::: 2013/ 08/ 21:::
Posted by Khin Lay Ngel at 11/17/2013 12:16:00 PM 1 comment:
တနင်္ဂနွေ နံနက်ခင်းသည် အရုဏ်ဦး နေရောင်နုအစား မိုးဖွဲဖွဲနှင့် နှုတ်ခွန်းဆက်ခဲ့၏..။ တိုကျိုသည် နွေနှောင်းသို့ ကူးစပြုနေပြီ..။
သင့်တင့်သည့် ရာသီဥတုကြောင့် အိပ်ရာ မဝင်ခင် ဖွင့်ထားခဲ့သော ကုတင်ခေါင်းရင်းမှ မှန်တံခါးများကို အသာဆွဲပိတ်ရင်း ဦးညွတ်မိသည်..။ ဤသို့ဖြင့် မီးခိုးနုရောင် တနင်္ဂနွေသည် ကျွန်မကို စတင် သိမ်းပိုက်တော့၏..။
. . . ☩.☩.☩.☩.☩.☩.☩.☩.☩.☩.☩ . . .
ကျွန်မကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးသော အရောင်သည် မီးခိုးရောင် ဖြစ်သည်..။ ကျွန်မ ပိုင်ဆိုင်သော အသုံးအဆောင်၊ အဝတ်အစား အတော်များများမှာ ရည်ရွယ်၍ ဝယ်ခဲ့သည် မဟုတ်သော်ငြား ထိုအရောင်လေးများ ဖြစ်နေတတ်သည်..။
နှစ်သက်ရာ အရောင်များအကြောင်း မိတ်ဆွေအချို့ ပြောဖူးသည်ကို သတိတရ ရှိလာမိသည်..။ တောက်ပသော အရောင်များကို ငြင်းဆန်လေ့ ရှိသူမှာ ကျွန်မဖြစ်၏..။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က “ဘယ်အရောင်ကို အကြိုက်ဆုံးလဲ..” ဟူသော မေးခွန်း အမေးခံရချိန်တွင် ချက်ချင်း မဖြေနိုင်ပဲ ဆွံ့အ နေခဲ့ဖူးသည်ကို အမှတ်ရသေးသည်..။
မည်သည့် အချိန်မှစကာ မီးခိုးနှင့် ကျွန်မ တစ်သားတည်း ရှိနေခဲ့သည် မသိ..။ သူငယ်ချင်း၏ မေးခွန်းအား ဖြေဆိုရန် အနှစ်သက်ဆုံးအရောင်ကို အချိန်အတော်ကြာ စဉ်းစား ယူခဲ့ရဖူးပါသည်..။ ကိုယ်တိုင် တိတိပပ သိလိုက်ချိန်တွင် ကျွန်မပိုင်ဆိုင်သော အဝတ်ဗီရိုသည် မီးခိုးရောင် အပြည့်ဖြင့် နေရာယူထားပြီးသား ဖြစ်နေတော့၏..။
ကျွန်မ အိမ်ခန်းလေးထဲရှိ စားပွဲပုလေးမှ အစ၊ ကွန်ပြူတာ စင်လေးပေါ်အဆုံး ဟိုဟိုသည်သည်၌လည်း သူတို့ရှိနေတတ်သည်..။ နု၊ ရင့် အနည်းငယ်ဆီ ကွဲပြားသည့် ထိုအရောင်လေးတိုင်းကို ကျွန်မ ချစ်သည်..။ ကျွန်မသည် လက်သည်းနီဆိုးခြင်းကို အနှစ်သက်ကြီး မဟုတ်လှ..။ သို့သော် ငွေမှင်ရောင် သန်းသော ခဲရောင် လက်သည်းနီ တစ်ရောင်တည်းကိုမူ နှစ်ပေါင်းများစွာ စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးတတ်လေ့ရှိသည်မှာ ယခုတိုင်ဖြစ်၏..။
မီးခိုးရောင်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့သော အတိတ်အကြောင်းအရာမျှ ကျွန်မတွင် မရှိခဲ့ဖူး..။ သူငယ်ချင်းအချို့နှင့် ဈေးဝယ်ထွက်သော အခါမျိုးတွင် ထိုအရောင် ပစ္စည်းများထံသာ လက်လှမ်းလေ့ရှိသော ကျွန်မအား သူတို့ ပြုံး၍ ကြည့်လေ့ ရှိကြ၏..။ မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်မတို့ မင်္ဂလာ ဆွမ်းကျွေးနေ့တွင်ဝတ်မည့် မြန်မာဝတ်စုံကို ရန်ကုန်တွင်နေသော တူမလေး တစ်ယောက်က “ဘယ်အရောင်ဝတ်မှာလဲ တီ..” ဟု ဝယ်ရန် မေးတုန်းက ဖြစ်သည်..။
မဆိုင်းမတွပင် မီးခိုးရောင်ဟု ကျွန်မဖြေခဲ့ပါသည်..။ ဝတ်စုံ ဝယ်ပေးမည့် ထိုတူမလေးသည် ကြားကြားချင်း အင်တင်တင် ဖြစ်နေခဲ့သေး၏..။ အနည်းငယ် တောက်ပသော အရောင်မျိုး ရွေးချယ်ရန် နားချခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် အလျော့ပေး လိုက်ရောကာ ကျွန်မနှစ်သက်သော အရောင်လေးကိုပင် ကျွန်မနှင့် မောင့်အတွက် မင်္ဂလာ လက်ဆောင်အဖြစ် သူ ဝယ် ပို့ပေးခဲ့သည်..။
မီးခိုးရောင်တွင် မည်သည့် ဂုဏ်သတ္တိမျိုး ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကျွန်မ မသိသလို စိတ်လည်း မဝင်စားပါ..။ ကျွန်မချစ်သော ထိုအရောင်လေး၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး စသည်သည် ကျွန်မအတွက် အရေးမကြီး..။ ဆန်းကျယ်မှုမပါ အယူဝါဒစွဲ ကင်းကင်းနှင့် ကျွန်မ သူ့ကို ချစ်သည်..။ ရိုးရှင်းစွာ သူ့ထံ၌ ကျွန်မ တွယ်ငြိသည်..။ ထိုမျှနှင့်ပင် ကျွန်မအတွက် လုံလောက်သည်..။ ကျွန်မတွေးရန် ကျန်အရာများ ဘာမှ လိုအပ်မနေ..။
ဟိုဟိုသည်သည် အတွေးများနှင့် ရှိနေခဲ့သော ကျွန်မ၏ မီးခိုးနု တိုကျိုသည် မီးခိုးရင့်အဖြစ် ကူးပြောင်း၏..။ မိုးဖွဲလေးများသည်လည်း ပိုမိုစိပ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်..။ အုံ့မှိုင်းနေသော ဤမနက်ခင်းမျိုးတွင် ကျွန်မစိတ်အစဉ်သည် ထုံထိုင်းမနေပဲ ပေါ့ပါး လန်းဆတ်၍ပင် နေသေး၏..။
မည်သို့ဖြစ်စေ မီးခိုးနှင့် ခြယ်သသော တိုကျို တနင်္ဂနွေသည် ကျွန်မအတွက် အနုစိပ်လှပသော ပန်းချီတစ်ကားဖြစ်သည်..။ တန်ဖိုးတထားနှင့် ကျွန်မ အမြတ်တနိုး ရှိရ၏..။ ချစ်စရာကောင်းသော ထိုလက်ဆောင်လေးနှင့် နိုးထခွင့်ပြုခဲ့သည့် တိုကျိုအားလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျွန်မ ကျေးဇူးတင်ပါသည်..။
✿ ခင်လေးငယ် ~ 2013/ 09/ 08 ✿
Posted by Khin Lay Ngel at 11/17/2013 11:21:00 AM No comments:
တဆစ်ဆစ် ညည်းတွားနေတဲ့ အစွန့်ပစ်ခံတွေက
မကြည့်ရက်တဲ့ ခြုံပုတ်တွေ- ရွက်ခြောက်အို အပုံကြီးတွေက
သူတို့ မျက်လွှာ ခလုတ်ကို ထ- ပိတ်ကြသတဲ့..။
“မီး” လာတယ် (မလင်းဘူး)
“မိုး” ရွာတယ် (ရေမပါဘူး)
ကမ္ဘာကြီးဆိုတာ ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့ အေးခဲခဲကြီးတဲ့
ငါမှန် နင်မှား (နင်မှား ငါမှန်)
ရှင်းလား.. ရှင်းရဲ့ မဟုတ်လား..
အဲ့လိုတွေ ငြင်းကြ ခုန်ကြ
ရနံ့တွေ တလှိုင်လှိုင်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးလည်း ငါတို့ ပါးစပ်ဖြားမှာ
ဟို မြောင်းထဲကဖား အစာမစားမီနဲ့ စားပြီးကာစလို
အကြင်နာ..“ရှား” ရင်း ခြုံပုတ်တွေကို ရှက်ဖို့မေ့
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ..“ခေါင်းပါး” ရင်း ရွက်ခြောက်တွေကို ရှက်ဖို့မေ့
မီး- မလင်းရခြင်းအကြောင်း၊ ရေ- မပါရခြင်းအကြောင်း၊
အရင်းခံကို ကောင်းကောင်း မေ့တယ်
ငါတို့တွေဟာ ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကိုလည်း မေ့နေတယ်..။
ခင်ဗျား စွန့်ထားတာ- ငါလည်း စွန့်ခဲ့တာ-
အဲ့ဒီ တစ်ခုတည်းနဲ့ အချိန် မီသေးတယ်..။
“““တဆစ်ဆစ် ညည်းတွားနေတဲ့ အစွန့်ပစ်ခံတွေက လမ်းမကြီးဘေးမှာ တွားသွားနေကြတယ်”””
မီးလည်း လင်း' တယ်
ရေလည်း ပါ' တယ်
ကမ္ဘာကြီးလည်း နွေး' တယ်..
ငါတို့သွားမယ့် လမ်းလည်း ပေါက်' ပါတယ်..။
ခင်လေးငယ် :: 2013/ 10/ 26 ::
Posted by Khin Lay Ngel at 11/17/2013 11:08:00 AM No comments:
“No more starting today with ~ what is left over from yesterday”
တိတ်ဆိတ် တိုးသက်ခြင်းတွေထဲ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ခေါင်းဝှေ့နေတဲ့ ည- ဟာ ချစ်ဖို့ သိပ်ကောင်းတယ်..။ သူ့ကြောင့် ကိုယ့်ရှုရှိုက်သံလေးတွေတောင် ပိုမို နူးညံ့သွားသလို..။
အဲ့ဒီအချိန်လေးဟာ ရေးဖူးတဲ့ အပိုင်းပိုင်းအစစ အရာလေးတွေကို ဖွဖွတိုးတိုးလေး တဖျပ်ဖျပ် ပြန်လှပ်မိချိန်လည်း ဖြစ်သေးတာ..
ကိုယ်သိပ်ထားလို့ တိတ်တိတ်ကလေး အိပ်နေတဲ့ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်ပိုင်း အတိုအစလေးတွေက ချစ်စဖွယ် အိပ်မောကျလို့..!!
“ပြန်လည်တူးစွ ချင်သေးတယ်...” လို့ မပွင့်တပွင့် တောင်းပန်ရင်း ပြုံးစစနဲ့ တံခါးခေါက်တော့လည်း ကြည်ကြည်လင်လင်လေး ထ- ဖွင့်ပေးကြတာပဲရယ် ~
ဒီလိုနဲ့ နွေဦးတုန်းက အလှဉ်းသင့်သလို ပြန်ထားဖူးတဲ့ ဂျပန်ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ဆီ အလည်ပြန်ရောက် ခဲ့သေးတယ်..။
~ နံနက်ခင်းသစ် ~
ထက်ပိုင်းချိုးဖြတ် လွှင့်ပစ်လိုက်ကွယ့် ~
ခန္ဓာကိုချိုး သန့်စင်ပျိုးကွယ့် ~
ဘယ်ဆေးရောင်မှ ချဘူးသူယောင် စ- ချယ်စမ်းကွယ့် ~
တိုးညှင်းညက်ညက် လေပြေနုသက် တွဲခိုဖက်တဲ့ မြက်ရနံ့သင်းရယ်...
ငှက်ငယ်ထွေးတို့ သံပြိုင်ဟစ်ကြွေးတဲ့ တေးသံသာတွေရယ်...
နုငယ်သွေးတဲ့ လေးနာရီပန်းလေးတွေရယ်... နဲ့
နွေနံနက်ခင်းဟာ ပန်းနုရောင်လေး ဆွေးလို့ ~
ရွှန်းဖြာလဲ့ဝေ တောက်ပစေကွယ့် ~
တွေဝေကင်းရင်း လျှောက်လှမ်းနင်းကွယ့် ~
Amano Haruka (အာမာနို ဟာရုကာ)
~ 新しい朝 ~
( 天野 遥花 )
ခင်လေးငယ် :: 2013/ 11/ 13 :::
Posted by Khin Lay Ngel at 11/17/2013 10:52:00 AM No comments:
======= (၁) =======
ပိန်းပိတ်မှောင်သော ညကောင်းကင်တွင် ကြယ်ကလေး တစ်လုံးတစ်လေမှ ဆော့ကစား မနေ..။ လ- သည် ထိုကောင်းကင်၌ ရှိနေပါငြား ရုပ်လုံးထွက် မပြ..။ တိမ်တိုက်တစ်မျှင်မျှ မရှိ..။ စိမ့်အေးနေသော ဆောင်းလေသည်ပင် တိုးသံသဲ့သဲ့မျှ မပြု..။ မေပယ်လ်ရွက်လေးများ အရိုးထိတိုင် ခိုက်ခိုက်တုန် ချမ်းနေပေရော့မည်ဟူသော စိုးရိမ်စိတ်သည် မလေးရင်၌ ပဲ့တင်ထပ်၏..။
ချိုအီအီ မောင့်တယောသံကို သတိတရ ရှိလာသည်..။ ထိုတယောသံ၌ မလေး၏ မျက်စောင်း လွှလွှကလေးများ ကခုန်ဖူးခဲ့ပါ၏..။ ပြုံးစစ နှုတ်ခမ်းဖြားမှ ထွက်ဆိုခဲ့ဖူးသော စကားများ၏ အသံသည်ကား စူပုတ်ပုတ်နိုင်ခဲ့ပြန်သည်..။ တရံတစ်ခါမျိုးတွင် ဆန့်ကျင်ဘက်ဆန်သော မူဟန်များနှင့် သရုပ်ပြတတ်သူ မလေးသည် မိမိကိုယ်ကို နားမလည်နိုင် ဖြစ်တတ်ပြန်သေး၏..။
======= (၂) =======
မလေးသည် ပန်းနုရောင်ခေါင်းအုံးပေါ်၌ ပါးတစ်ဘက် အပ်ထားလျက် ရှိ၏..။ မျက်လွှာများကို မှေးစင်းထားသည်..။ ထိုညကို တစ်ဦးတည်း ပိုင်ဆိုင်မှု ပြုလိုက်သောအခါမှ မောင့်တယောသံသည် မလေးနှလုံးအိမ်သို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပိုမိုတိုးဝင် စီးမျောလာတော့၏..။ မေပယ်လ်ရွက်ကလေးများပင် ပြုံးရိပ်သန်းနေလိမ့်မည်ဟု မလေး ထင်မိသည်..။
မောင်သည် မှော်ဝင်နေသူ တစ်ဦးအသွင်နှင့် တေးသွားတစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်ကို လှလှပပ မနားတမ်း ပြောင်းလဲတီးခတ်နေ၏..။ ကြိုးများကို ဖိကိုင်ထားသော မောင့် ဘယ်ဘက်လက် ထိပ်ဖြားလေးများ နာရှာရော့မည်..။ စိုးရိမ်စိတ်နှင့် “မောင်...” ဟု ဖွဖွခေါ်မိချိန်တွင် တယောသံသည် ရုတ်တရက်ပင် မလေးထံပါးမှ ပျောက်သွား၏..။
မောင်ရေ~~~~ ဟု တဆတ်ဆတ်တုန်ရီသော နှုတ်ခမ်းများမှ ထပ်ကာတလဲလဲ တကြော်ကြော် အော်ခေါ်သံသည် ညဉ့်လယ်ယံ၌ ကျယ်လောင်စွာ မြည်ဟိန်းနေသည်..။ ငြိမ်ဆိတ်စွာဖြင့် ရင့်ရင့်ကျက်ကျက် လှပခဲ့သော ညသည်ရုတ်ချည်း အကျည်းတန်သွား သယောင်ရှိ၏..။ မလေးသည် နွမ်းနယ်စပြုနေပြီ်..။ ကွဲအက်လာသော လည်ချောင်းနှင့်အတူ မလေး ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးသည် ဖြူဖျော့ပါးလွှာလွန်း နေတော့သည်..။
======= (၃) =======
နဖူးပေါ်၌ လက်ဖဝါးတစ်ခု၏ အထိတွေ့ရသည်..။ မောပမ်းနွမ်းနယ်နေသော မလေးသည် ရှိသမျှ အားအင်ကို စုစည်းကာ မျက်ခွံနှစ်လွှာကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းဖွင့်၏..။ အမြင်အာရုံများ မပီဝိုးဝါး အကြားမှပင် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော မောင့်မျက်ဝန်းများ လဲ့နေသည်ကို မြင်သည်..။ အိုကွယ်.. မောင်မျက်ရည်ဝဲနေတာ များလား..!!
“အသက်လေးကို မှန်မှန်ရှူရင်း သတိလေးမှတ်နေ..”
“မောင် ရှိနေတယ်.. မလေးနဲ့ အတူတူ မောင်ရှိနေတယ်..”
“စိတ်လေးပူမနေရဘူး.. မောင် မလေးဘေးမှာ အမြဲတမ်း ရှိနေတာပါကွယ်..”
အမြဲခန့်ငြားတည်ငြိမ်သော မောင့်အားပေးစကားသံသည် မပြောင်းမလဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ရှိလျက်ဟု ထင်မြင်စရာပင်..။ သို့သော် အဆုံးသတ် စကားအချလေးများ၌ တိမ်ဝင်သွားသော မောင့်စိုးရိမ် ပူပန်စိတ်များ အကြောင်း မလေး သိ- နေပြန်သည်..။ ရေစွပ်ထားသော ဝါဂွမ်းတစ်စနှင့် နှုတ်ခမ်းဖျား နှစ်လွှာကို ဖွဖွထိသုတ်ပေးသည်ကို သိ၏..။
“ဒီလိုပဲ မောင့်မလေးက ခဏခဏ အဖျားကြီးတတ်တာလေ..”
“အားတင်းပြီး အသိလေး ကပ်ထားပေး.. အဖျားကျတော့မှာရယ်..” တဲ့..။
======= (၄) =======
မလေးသည် အားယူပြီး မောင့်ကို ပြုံးပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစား၏..။ ဖျော့တော့တော့ သူမ အပြုံးလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် မောင့်ကို မြင်စေချင်စမ်းသည်..။ “ဟင့်အင်း.. မလေး နေကောင်းပါတယ် မောင်ရဲ့..” ဟုလည်း တိုးဖွဖွ ပြောလိုသေးသည်..။ သို့သော် မလေးသည် ထိုအရာနှစ်ခုလုံးကို မစွမ်းသူသာ ဖြစ်နေ၏..။
တစ်ခုတော့ မောင့်အား မလေး ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်..။ ထိုအရာသည် မောင့်ပူပန်စိတ်များ ရုတ်ချည်းပပျောက်နိုင်သော အရာဖြစ်သည်ကို မလေး ကောင်းကောင်း သိသည်..။ မလေး မျက်ဝန်းတွေထဲ ငေးစိုက်ကြည့်နေသော မောင်သည် ထိုအရာလေးကို တိတိပပ မြင်နိုင်ပေမည်..။
မလေး၏မျက်ဝန်းများသည် ဖျော့တော့လွန်းနေပါသော်ငြား အေးအေးမြမြလေး ဖြစ်၍နေလိမ့်မည်..။ ဝေဒနာ အရှိန်နှင့် ရဲရဲတောက်နီနေသော ထိုမျက်ဝန်းများ အထဲ၌ ချမ်းမြေ့ခြင်းကို မောင် အသေအချာ ရှာတွေ့ပါလိမ့်မည်..။ ထို့အတူ မလေး၏ နှလုံးအိမ်အတွင်း၌ မောင်အမြတ်တနိုး အရှိဆုံးသော ကြည်လင်မှုကလေး ရှိမြဲ ရှိနေခြင်းကိုလည်း ကျေကျေနပ်နပ်ပင် မောင် မြင်တွေ့နိုင်သေးသည်..။
မလေးသည် ထိုဆောင်းတစ်ည၌ မောင့်အား စိတ်ချလက်ချ ထားခဲ့ကာ မျက်လွှာအစုံကို မှိတ်လျက် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်လေးပင် ငြိမ်ဝပ်သွားတော့၏..။
======= (၅) =======
အဖြူရောင် ဖုန်းအပြားလေးဆီမှ သီးချင်းသံစဉ်တစ်ပုဒ် ထ- မြည်သည်..။ အိပ်ရာထရန် အချက်ပေး နှိုးစက်ဖြစ်၏..။ မျက်လုံးများ မှိတ်ထားလျက်ကပင် ဖုန်းကို စမ်းကာ ပိတ်သည်..။ မျက်လုံးအစုံကို ဖွင့်ဟကာ ကြည်ကြည်လင်လင်လေးနှင့် နေ့သစ်ကို ကြိုဆိုလိုက်၏..။ သူမ၏ လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ညာဘက်၌ အိပ်နေသော မောင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် အနည်းငယ်မျှ လူးလူးလွန့်လွန့် ဖြစ်လာသော်ငြား နိုးပုံမရ..။
ညတာရှည်သော ဆောင်းည၌ မက်ခဲ့သည့် အိပ်မက်အကြောင်း မလေးသည် မောင့်အား စီကာပတ်ကုံး ပြန်လည်ပြောပြ လိုလှပြီ..။ တစ်ညတာလုံး ခေါင်းတင်ကာမှေးအိပ်ခဲ့သော မောင့် ဘယ်လက်မောင်းအား ခပ်ဖွဖွ မွှေးမွှေးပေးရင်း နှိုးမိသည်..။ မောင်သည် သူ မက်၍နေနိုင်ပါသော အိပ်မက်အား အရှိန်အဟုန် ကောင်းကောင်းနှင့်ပင် ဆက်မက်နေဟန် တူ၏..။
မလေးသည် ဆံနွယ်များကို လက်ဖြင့် စုသိမ်းရင်း နေခြည်နုများနှင့်အတူ သဘောတကျ ဟက်ဟက်ပက်ပက် လိုက်လံ ရယ်မောနေတော့သည်..။ မောင်ကား တုတ်တုတ်မျှပင် မလှုပ်သေး..။ ခင်ပွန်းသည် မောင်သည် အင်မတန် အိပ်ရာနှိုးရ ခက်ပါကြောင်း မလေးသာလျင် အသိဆုံးဖြစ်မည်..။
ခင်လေးငယ် ::: 2013/ 11/ 12 :::
Posted by Khin Lay Ngel at 11/17/2013 10:43:00 AM No comments:
သူမ ~~ (သို့မဟုတ်)
၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းက ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ “ကျွန်မ လက်ရာ အဟောင်းလေး..”
ဘိန်းစားချင်းအတူတူ တစ်မူးပိုရှူ ချင်သူလိုမျိုးလူဟာ သူမ..!!
အရူးရယ်လို့ လူတွေ သတ်မှတ်တာကို ကျေကျေနနပ်နပ် ခံယူရင်း ပိုမိုရူးသွပ် နေချင်သူ..။ နူးညံ့ညင်သာစွာ ချစ်တတ်လွန်းရက်နဲ့ ကြမ်းရှရှ ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပေါက်ကွဲတတ်သူ..။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အခန်းလေးကို အမှောင်ချလို့ ထောင့်လေးတစ်ထောင့်မှာ ပြေပြေလေးမှေးရင်း ဘယ်သူမှ မမြင်နိုင်မှန်းသိပါရက် ပြုံးနေတတ်သူ..။
ဖွာလန်ကြဲ ဆံပင်တွေကို ဖြန့်ချထားရင်း ဘေးမှာဘယ်သူမှ မရှိပါပဲ သူမမျက်ရည်ကို တစ်စုံတစ်ဦးမြင်မှာ စိုးရိမ်တကြီး ရှိရင်း ငိုရှိုက်နေတတ်ပြန်သူ..။ ခပ်သော့သော့ လက်ရေးနဲ့ “ဖေဖေရေ..” လို့ ကောက်ခြစ် တတ်သလို ~ “မေမေရယ်... အနားလေးကို လာပြီးထွေးပွေ့ထားပေးပါ..” လို့ ရေးကာ နေတတ်သူ..။
လက်ဖဝါးအောက်ခြေ လက်ကောက်ဝတ်က သွေးကြောလေးတွေ ဆုံနေတဲ့ နေရာမှာ အနှစ်သက်ဆုံး ရေမွှေးတစ်စက် ခပ်ဖွဖွစွတ်လို့ တစ်စုံတစ်ရာကို လွမ်းမောနေရင်း ~ ခပ်ကြောင်ကြောင် ခံစားချက်နဲ့ ရေမွှေးပုလင်းကို နံရံမှာ ပစ်ပေါက်ခွဲတတ်သူ..။ လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးတွေးမျှော်ခွင့်ကို အာသာငမ်းငမ်း မက်မောရင်း.. အထာမကျတဲ့ စည်းဘောင်တွေကြားမှာ အကျဉ်းချခံ ထားရသူ..။
Round ထားတဲ့ “နွေဦးကံ့ကော်” လို သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ တစ်ညလုံး ကုန်ဆုံးတတ်သလို.. Linkin Park ရဲ့ “Breaking The Habit” သီချင်းမျိုးနဲ့ ဟက်ဟက်ပက်ပက် မချိပြုံး ပြုံးတတ်သူ..။ ဇမ်နူး ရဲ့“အချစ်ရှိသောနေ့စွဲများ” ကို ငြိမ့်ငြိမ့် ညင်ညင်သာသာလေး နားထောင်တတ်သလို Evanescence ရဲ့ “Going Under” ကို အကျယ်ကြီး ဝူဖာ ငိုမတတ် ဖွင့်ထားတတ်သူ...။
အိပ်ခန်းလေးအတွင်းမှာ နှင်းဆီနံ့တွေနဲ့ ထုံသင်းအောင် ဝေဝေဆာဆာ ပြင်ဆင်တတ်သလို.. အာရုံမလာရင် ရေထသောက်ဖို့ကိုတောင် အင်မတန် ဝန်လေးတတ်သူ..။ မိန်းမဆန်ဆန် စကပ် စသည်.. နှစ်ခြိုက်စွာဝတ်တတ်သလို.. ဂျင်းဘောင်းဘီစုတ် တစ်ထည်တည်းကို တစ်ပတ်ခန့် ညစ်ပေပေနှင့် ဝတ်တတ်သူ..။ အတွဲလိုက် အုပ်စုလိုက် လူအများသွားတတ်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဂျစ်ကန်ကန် မျက်နှာပေးနဲ့ ခပ်တည်တည် တစ်ယောက်ထဲ သွားထိုင်နေတတ်သူ..။
ငွေကြွေး ကြွယ်ဝဖို့ လုံးဝ မမက်မောပေမဲ့ အတွေးတွေနဲ့ လွင့်မျောနေခွင့်ကို ချမ်းသာချင်သူ...။ အမိန့်တွေ အပေးခံရတိုင်း ခေါင်းခါတတ်သလို.. အမှားတွေ ထောက်ပြခံရတိုင်းလည်း “ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မကိုယ်တိုင်က လွဲနေသူပါ” လို့ ပြုံးပြီး မျက်းလုံးချင်းဆိုင် ကြည့်တတ်သူ..။
သူမမျက်လုံးတွေ လဲ့နေတတ်တာကို ချီးမွမ်းခံရတဲ့ နေ့တွေတိုင်း အခန်းထဲပြန်ရောက်ချိန် မှန်တစ်ချပ်ထဲ စောင်းငဲ့ကာ ကြည့်ရင်း “မျက်ဝန်းလဲ့တာ မျက်ရည်ဝဲနေလို့ ဆိုတာ ရှင်တို့မှ မသိတာ.” လို့ သနားစရာ တဟားဟား နဲ့ အော်ရီ/ရယ် တတ်သူ..။ လက်ချိုးရည်လို့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဟင်းချက်ကျွေး တတ်သလို.. အတော်များများမှာတော့ အစားမမှန်တဲ့ သူမအတွက် သူတို့ ယူလာပေးတတ်တဲ့ ပေါင်မုန့်တစ်ချပ်နဲ့ တစ်နေကုန် ပေကပ်နေတတ်သူ..။
ငပိရည်နဲ့ ထမင်းကြမ်းကို စိတ်လိုလက်ရ အားပါးတရ နယ်စားတတ်သလို.. ချိ(စ်)စတစ်(ခ်)တွေကို စိတ်မပါ့တပါနဲ့ ကိုက် ကိုက်နေတတ်သူ..။ နားလည်ရခက် သူတွေကို နားလည်ပေးတတ်သလို အများစုက လူလိမ္မာဟု တဖွဖွပြောနေသူမျိုးကို ခေါင်း ခါရမ်းကြည့်တတ်သူ..။ အရိပ်ပြစရာမလို တန်းကနဲ အကောင်လိုက် မြင်တတ်သလို... ထင်ထင်ရှားရှား အရိပ်တစ်ခုဘေးနားမှာ ထင်းနေခဲ့ပါလျက် ထုံထိုင်းထိုင်းနှင့် ဘာမှန်းမသိသူ..။
မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ယောက်ျား တစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးဟာ တမ်းတူဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဟု တရားသေ သတ်မှတ်သူ..။ မျှော်လင့်ခြင်း ဆိုတာကို မုန်းတီးစိတ် ရှိသလို.. မျှော်လင့်ရမှာကို ကြောက်ရင်းလန့်ရင်း စက္ကန့်၊ မိနစ်၊ နာရီ၊ နေ့ရက်တွေကို ဘာ့အတွက်မှန်းမသိ လက်ချိုး ရေတွက်နေပြန်သူ..။
သူမအချစ်ကိုပေးဖို့ တွန့်တိုဝန်လေးရင်း.. ချစ်ခြင်းကို ရူးသွပ်စွာငတ်မွတ်လို့ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်နဲ့ အပြည့်အဝ ရယူစားသုံးချင်သူ..။ အလွဲတွေကို နမူနာယူဖို့ထက်... ခေါင်းမာမာနှင့် တစ်လွဲတွေ အထပ်ထပ် ကျူးလွန်ပြန်သူ..။
ဆန့်ကျင်ဖက်များစွာ လွန်ဆွဲ ဖွဲ့တည်ထားတဲ့ သူမစိတ်အစဉ်ကို အထိတ်တလန့် နဲ့ အိပ်မက်မှာ ပြန်မြင်ရချိန်~~~
“သူမကိုယ် သူမ အော့အံချင်အောင် မုန်းတီးစက်ဆုပ်လို့..”
“သတ်ပစ် ချင်လောက်အောင် နာကြည်းရွံရှာလို့..”
“စုတ်ပြတ်သတ်သွားအောင် ကုတ်ဖဲ့ချင် စိတ်နဲ့ နောက်ကျိမူးဝေလို..”
“နောက်ဆုံး မောဟထန်နေတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ အာခေါင်ကိုခြစ်ပြီး အော်ဟစ်မိလို့..”
အဆုံးသတ်မှာတော့-- “သွက်... သွက်... ချာ.... အ.... ရူး.... တစ်.... ယောက်....” ရဲ့ ပေါက်ကွဲခြင်းမျိုးတွေက သူမကို အနိုင်ယူ အပိုင်သိမ်းလိုက် တော့တာပါပဲ.....။
Posted by Khin Lay Ngel at 7/14/2013 02:41:00 PM No comments:
✿ 2013/ 01/ 01- မြန်မာ စံတော်ချိန် 00: 00 AM သို့ ဦးညွှတ်လျက် ✿
Posted by Khin Lay Ngel at 6/01/2013 04:38:00 PM No comments:
နွေဦးဟု ဆိုနိုင်ခဲ့သော ရာသီသည် ရက်သတ္တပတ် သုံးပတ်ခန့်သာ ရှင်သန်၍ ရုတ်တရက် ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့သည်..။ ထူထဲအောင် ဝတ်ကာ အနွေးဓာတ်ကို ပျိုးယူရသည့် အအေးလွှမ်းသော နေ့ရက်ဆီသို့ ပြန်လည် ဦးလှည့်သည်မှာ သုံးရက်မြောက် ဖြစ်သည်..။
မည်းမှောင်သည့် တိမ်တိုက်များနှင့် နေခြည်ကို မှိုင်းတိုက်ထုတ်သော တိုကျိုသည် ငုတ်လျှိုးလျှိုး နိုင်လှသည် ထင်မိ၏..။ တဝေါဝေါနှင့် မာန်ပါသော လေကို အံတုရင်း ခေါင်းမာမာနှင့် အရွေ့နှေး သည်မှာလည်း ထိုတိမ်တိုက် မည်းများပင်..။
အပျိုမလေးသဖွယ် အရောင်စုံ ကူးပြောင်းလွယ်သော တိုကျို၏ ကောင်းကင်ပြင်သည် သုံးရက်တိတိ နေ့နေ့ညည အိုမင်းရင့်ရော်သည့် အသွင်ဆောင်နေ၏..။
ရာသီတစ်ခုသည် ရုပ်၊ နာမ်၊ ခန္ဓာ တွင်းပြင်သို့ လွယ်လင့်တကူ ဝင်ရောက် ပူးကပ်နိုင်သည့် အစွမ်းရှိသည်ကို သတိထားမိသည်မှာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုစာ ရှိပြီ..။ မည်သို့ဆိုစေ တစ်သားတည်း ထပ်တူကျရင်း စီးမျောလွယ်သည့် သဘောဆောင်သော စိတ်ကို မုန်းတီးခြင်း မဖြစ်..။ ကိုယ်တိုင် အမြတ်တနိုး နှစ်ခြိုက်မြဲ ဖြစ်သည်..။
ဥတုရာသီအချို့ကို ခပ်တည်တည်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြုကာ မူပိုင်အဖြစ် အပိုင်စားသိမ်းမည်..။ မည်သူ့ ခွင့်ပြုချက်မျှ လိုအပ်မနေခဲ့..။
ကျွန်မ၏ ရာသီများကို ~~~
“နားလည်ရလွယ်ကူသော အရောင်များနှင့် ခြယ်သလို၏”
“လူ- ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်အသွင် အသက်သွင်းလို၏”
“နတ်ဘုရား တစ်ပါးအဖြစ် ရွှန်းရွှန်းလဲ့လဲ့ တင်စားလို၏”
“ချိုမြိန်သော ပန်းသီးတစ်ကိုက် အဖြစ် အရသာရှိရှိ စားသုံးလို၏”
“ငှက်ငယ်အသွင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပုံဖော်လို၏”
“ကူးခတ်မြူးပျော်နေသော ရွှေငါးလေး တစ်ကောင်ဖြစ် လှလှပပ ဖန်ဆင်းလို၏”
“နဂါးငွေ့တန်းအဖြစ် တခမ်းတနား ငေးမော မှင်တက်နေလို၏”
“ဆိုးပေပေ ဂျစ်ကန်ကန်နှင့် ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်ကလေး၏ စူးရှရှ မျက်လုံးများထဲသို့ မွှေနှောက်သူအဖြစ် စိုက်ကြည့်လို၏”
ကျွန်မ အပိုင်သိမ်းထားသော ရာသီများ အလိုအတိုင်း ခေါ်ဆောင်ရာသို့ ကောက်ကောက်ပါအောင် ချစ်ခင်စွာ ကျွန်မ လိုက်မည်..။ သူတို့အားလုံးသည် တစ်သီးတစ်သန့် ရှိနေသည်..။ အခြားသူများ ပိုင်ဆိုင်သော ရာသီများနှင့် တူ- မတူ “နိုင်းယှဉ်ခြင်း အမှုကို မည်သည့်အခါမှ ကျွန်မ မပြု..”
စိတ်နှလုံးအတွင်းသို့ ငုတ်လျှိုးတူးစွသော အခါ အတိတ်၌ မွေးမြူခဲ့ဖူးသည့် ပုတ်အက်နေ သယောင်ရှိသော ရာသီအချို့ကို ပြန်တွေ့၏..။ တည်ငြိမ်သော စိတ်ဖြင့် အသာတကြည်နှင့် ဖယ်ထုတ်သည်..။ လေထုကို ခိုတွယ်စီးရင်း သူတို့လာရာ လမ်းဆီဲသို့ တိုးဝင်ကွယ်ပျောက်သွားသည်..။ အရာအားလုံးသည် အသစ်အသစ်သာ ဖြစ်၏..။
ကုတင်ခေါင်းရင်းရှိ ပန်းနုရောင် လိုက်ကာရှည်ကို ဆွဲဖွင့်မိသည်..။ ရက်အချို့တွင် မှိုင်းပြနေခဲ့သော တိုကျိုကောင်းကင်သည် ယနေ့ (တနလာင်္နေ့) နံနက်ခင်း၌် ရှင်းသန့်သော နေခြည်တို့ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း ကခုန်နေသည်..။ နေခြည်နုတို့၏ ပျော့ပျောင်းလှသော သိမ်မွေ့မှုသည် ကျွန်မထံ ကူးစက်၏..။ ကျွန်မ၏ မျက်စံနက်များထဲတွင် ပြာလဲ့လဲ့ပုံရိပ်များ ထင်ဟပ်နေပါလျက် ပန်းနုရောင်သို့ ချစ်စဖွယ် ပြောင်းပြန်သည်..။
ဝင်သက်နှင့် ထွက်သက်သည် နှာဖြားဝတွင် စည်းချက်ညီညီ ရှိလှ၏..။ နဘေထပ်စရာ မလို- ကာရံညီနေသည့် ထို အဖြစ်သည် ကျွန်မ၏ ရာသီသစ် ဖြစ်သည်..။ တစ်စုံတစ်ရာ၏ ခွင့်ပြုချက် မလိုအပ်ခဲ့သော ကျွန်မပိုင်ဆိုင်မှု ပြုထားသည့် ဥတုရာသီများထံသို့ မည်သူမဆို အဆီးအတားမဲ့ ဝင်ထွက်လေ့လာ နိုင်သည်..။ သဘောတူ ခေါင်းညိတ်ထောက်ခံရန် မလို..။
“ကျွန်မ၏ ဥတုရာသီတိုင်းထဲတွင် ကျွန်မ ချစ်မြတ်နိုးသော လူသားအချို့ ငြိမ်ဝပ်အေးချမ်းစွာ အတူတကွ ရှိနေကြ၏..”
Posted by Khin Lay Ngel at 4/24/2013 02:43:00 AM No comments:
Posted by Khin Lay Ngel at 4/24/2013 02:27:00 AM No comments:
ခပ်လှမ်းလှမ်း ရေစပ်မှာ ခြေဆင်းထိုင်ခဲ့သူ လူရွယ်က ချွတ်ထားတဲ့ သူ့ ဖိနပ်ကို ကောက်စီးဖို့ မတ်တပ် ရပ်လိုက်တယ်..။
ဆိုင်းဆရာ့ စကား ခဏငှားသုံးရင် ဒါဟာ.. “ပတ်စာခွာ ဖျာလိပ်” အဲ့ဒီနေ့အတွက် သူ့ အိမ်ပြန်ဖို့ ဖြစ်တယ်..။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မလည်း ရထားကြီးစီး အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက် ပြန်ခြင်းလည်း ကျွန်မ မသိဘူး။ ကျွန်မ အိမ်ပြန်နေတယ်..။
ကျွန်မ စီးနေတာ.. ခနော်နီ ခနော်နဲ့ ရထားပဲ- မကျေနပ်ဘူး။ ငယ်က စီးဖူးတဲ့ ရထားလို “ဘော်ဘူး” မမြည်ဘူး။ “ဂျုံးဂျုံး ဂျက်ဂျက်” ခုတ်သံ မကြားရဘူး..။ နောက်.. ကျွန်မ လိုအပ်တဲ့ အဟုန်နှုန်းနဲ့ ခုတ်မောင်း မပေးနိုင်သေးဘူး..။
ဒါကိုပဲ ရထားလို့ ခေါ်ရင်း တို့လို့တန်းလန်း လက်တွေမြှောက်ထားလျက် အိပ်ငိုက်နေကြ သေးတယ်..။ ဒီလိုနဲ့ အိမ်ပြန်ရပြန်ပြီ..။
““ဒီနေရာမှာ တိတိပပ သိနေတာ ရှိတယ်- ရထား ခုတ်မောင်းသူဟာလည်း အိမ်ပြန်နေတဲ့ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်ပဲ ရယ်..””
တစ်ကိုယ်ရေတိုက်ခန်း ကျဉ်းလေးသော့ကို ဖွင့်တာလည်း ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်မှန်း မမှတ်မိဘူး..။ မှတ်မိနိုင်စရာလည်း မရှိဘူး။ ကျွန်မ မမှတ်မိဘူးဆိုတာ အေးအေးဆေးဆေး သိ- နေပေးလိုက်တော့ ပွဲပြီးသွားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မရိုးနိုင်စွာ ကျွန်မ အိမ်ပြန်တယ်..။
“အိမ်ပြန်ရောက်ပြီလို့ ဘယ်သူ အော်ပြောသလဲ..?” မရောက်သေးဘူ။ ပြန်တုန်း..ဒီလိုနဲ့ ပြန်နေတုန်း..။ ပြန်ပြန် နေရတုန်း..။
မပြီးနိုင်မစီးနိုင်- တစ်မျှော်တစ်ခေါ်- ရှည်ရှည်လျားလျား- ထွေထွေပြားပြား- တောင်ဆင်းတောင်တက်- တိုးလျှိုး ငုတ်ကူး- နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ကိုယ့်အသိကိုယ် ပျိုးခင်းပြီး အိမ်... ပြန် ပြန်တယ်..။
အိမ်က “ထွက်” တယ်..။
အလုပ် “သွား” တယ်..။
ထမင်း “စား” တယ်..။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ပြောပြော- ပြောစေ.. ကျွန်မ မငြင်းပါဘူး..။ လက်ခံပေး ထားတယ်။ ကျွန်မကတော့ နေ့နေ့ ညည အိမ်ပြန်ခြင်း တစ်ခုပဲ လုပ်နေတာရယ်..။
တစ်ကိုယ်စာ ပတ်ပတ်လည်ကို ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်မိတိုင်း ဖြည့်စရာတွေက အများသား..။ ဒါပေါ့..!! လိုအပ်နေသေး တာကိုး..။
ကျွန်မ ဖြည့်မိသလား.? ပြည့်သွားသလား.? ဟုတ်ပြီ. ဖြည့်ဖူးမယ်- တစ်ခါတရံ ပြည့်ဖူးတယ်- ဆိုဦးတော့.. သေချာပါတယ် ကျွန်မ အိမ်ပြန်နေဆဲပဲ..။
ပြန်စရာ မလိုအပ်တော့ချိန် ရောက်တဲ့အထိ ကျွန်မ အိမ်ပြန်နေတုန်းပါပဲ..။
အိမ်ပြန်နေတယ်..။ အိမ်အပြန်လမ်းကို မြင်နေပြီးသား ကျွန်မဟာ အိမ်ပြန်သူသာ ဖြစ်ပါတယ်..။
2013/ 03/ 14
Posted by Khin Lay Ngel at 4/24/2013 02:17:00 AM No comments:
~ ငွေနှင်းရည်ဖွဲ့ ဆွေခဲ့လျင် ~
တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးအတွင်း လူးလာခေါက်တုံ့ ခြေလှမ်းကာ သတိမှတ်ခြင်းကို ခဏတာမျှ ရပ်နားလိုက်သည်..။ ဝန်းကျင်သည် တိတ်တဆိတ် ရှိနေသည်..။
ဆောင်းလေသည် ညှင်းသွဲ့ရာမှ တစ်ရံတစ်ခါ အရှိန်ပြင်း၍ နှင်းပွင့်များကို ဖရို့ဖရဲ သယ်ဆောင်လာ တတ်သည်..။ နေထွက်မှ နေဝင်ချိန်ကျော် သန်းကောင် ညဉ့်ယံအထိ ဒီဂရီ မပြောင်းလဲသော အအေးဓာတ်နှင့် လောကတစ်ခွင်ကို စိုးမိုးထားသည်..။ ပီဘိ ဆောင်းရာသီ သည် ကဗျာဆန်ဆန် သွေ့ခြောက်ခြောက် နိုင်လွန်းသည် ထင်မိ၏..။
အဝေးပြေး လမ်းမများပေါ်တွင် နှင်းခွဲသံကြိုးများ ချိတ်ပတ်ထားသော ကားတာယာများသည် နှင်းများကို ယက်ကာထုတ်ရင်း တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ် အဖန်ဖန် လည်ပတ်၍ ရှိနေပါလိမ့်မည်..။ ပြတင်းပေါက်ကျယ်ကို ခပ်ဟဟ ဖွင့်ကာ မျက်လွှာကို ပိတ်၍ တစ်ခဏတာမျှ ကြမ်းရှရှလေနှင့် တိုက်ရိုက် တွေ့ထိလိုစိတ် ဖြစ်သည်..။
ဆောင်းသည် လွမ်းဆွတ်တတ်သော စိတ်အခံကို မြှောက်ထိုးပင့်ကော် လုပ်ကာ ကလူကျီစယ် ယောင်ဆောင်၍ မြူဆွယ်လေသည်..။ မျက်နှာပြင်ကို ထိုးမော့ကာ ပါးပြင်နှစ်ဘက်ကို တိုက်စားဆော့မြူဖို့် အခွင့်ပြုလိုက်သည်..။ ထိုအခါ ဆောင်းသည် အလောတကြီးပင် လှလှပပ ပညာပြတော့၏..။ ပန်းနုရောင်သန်းသော နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ခဏတာ အတွင်းမှာပင် ပြာနှမ်းနှမ်း နိုင်စေသော အစွမ်းရှိသည်..။
ဆောင်းသည် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပင် တဟားဟားနှင့် ရယ်မော၏..။ ညသည် ဆောင်း၏ ရယ်မောသံနှင့် ဝံ့ကြွားကြွားနိုင်ကာ ပိုမိုရုပ်လုံး ကြွလာသယောင် ရှိသည်..။ လွတ်လပ်သောစိတ်နှင့် ဆောင်းလေ၏ အတွေ့အထိကို ခံစားသည်..။ ပါးလွှာသေးငယ်လှသော နှင်းပွင့်ကလေးများသည် မှိတ်ထားသော မျက်တောင်ရှည်များပေါ်သို့ ငြိမ်ဝပ်စွာ သက်ဆင်းလာပြီး ထုထည်ပြု၏..။
စိတ်အစဉ်သည် ပေါ့ပါးလွတ်လပ်နေသည်..။ ဆောင်းသည်လည်း သူ့ သဘာဝအလျောက် ကြမ်းရှရှ ထွေးပိုက်မှုနှင့် လွတ်လပ်ခြင်း အပြည့်ရှိနေပါ၏..။ ဆောင်း၏ ရယ်မောသံနှင့် အတူ သူမသည်လည်း ပြုံးတုံ့တုံ့ မူဟန်နှင့် အလိုက်တသင့် ရှိပေးနေမိသည်..။ တစ်ခဏကြာသော် တိတ်တဆိတ်နှင့် နှုတ်ဆက်ကာ ပြတင်းတံခါးကို ဖွဖွပင် ပိတ်လိုက်၏..။
ဆောင်းသည် မည်းမှောင်သော ညဉ့်နက်ထဲတွင် ကျေနပ်စွာနှင့် နေရစ်ခဲ့ပေလိမ့်မည်..။ သို့မဟုတ် သူမနှင့် စိတ်အသွား တူသော တစ်စုံတစ်ဦးကို ကြည်စယ်လိုစိတ်နှင့် ဟိုဟိုဒီဒီ၌ လိုက်လံ ဖွေရှာမှု ပြုကောင်းပြု နေနိုင်ပါသေးသည်..။ ကြမ်းရှရှနိုင်သော ဆောင်း၏ နှလုံးအိမ်သည် နူးညံ့လှပါကြောင်း သူမ ကောင်းကောင်း သိ၏..။
မည်သို့ဆိုစေ... ထိုခဏတာအတွက် ဆောင်းကို ကျေးဇူးတင်သည်..။ ဆောင်းသည်လည်း သူမနှင့် ထပ်တူ ဦးညွှတ်တရှိ ရှိလျက် နေပါလိမ့်မည်..။ ဆောင်းညသည် နဂိုရှိရင်းထက် ပိုမိုလှပ တိတ်ဆိတ်ခန့်ငြား နေ၏..။
ကီးဘုတ်ခလုပ်များကို နှိပ်လိုက်သည့် အသံနှင့် ရှုရှိုက်ပြုသော တိုးညှင်းညှင်း အသံလေးများမှ လွဲ၍ အခြား ဘာဆိုဘာမျှ သူမ ဝန်းကျင်တွင် မရှိတော့..။
~ ချမ်းမြေ့လျက် ~
Posted by Khin Lay Ngel at 3/03/2013 11:20:00 PM No comments:
✿ 2013/ 01/ 01- မြန်မာ စံတော်ချိန် 00: 00 AM သို့ ...